သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ချစ်ရေးချစ်ရာ ကုထုံး
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 14:11
ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ခုထိမစွန်သေးတာက ခက်တယ်..
Friday,9July 2010 at 16:03:00 BST
ဒီလိုကျမ်းတွေဆိုတာ.. တကယ်ပဲ ရှိနေတာကိုး။။ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတွေဗေဒင်မဟော ရ ဆေးမကုရဆိုတဲ့ပညတ်ချက်ထားခဲ့တာဖြစ်မယ်။
Friday,9July 2010 at 16:57:00 BST
Friday,9July 2010 at 16:59:00 BST
Friday,9July 2010 at 17:48:00 BST
Friday,9July 2010 at 21:47:00 BST
ဘယ်သူပြောသလဲ သူကြီး မစွန်သေးဘူးလို့ -
တကုံးကုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေလေရဲ့ ဗျာ-
Friday,9July 2010 at 22:23:00 BST
ဓာတ်သိ ညှပ်စိ said...
သဂျီးမင်း ... ၀ါဝင်ခါနီးဘီနော်။
ဒီတ၀ါ ဘယ်မှာ ဆိုမတုန်း။ :)
Friday,9July 2010 at 23:05:00 BST
သြော်... တကယ့်ဆေးလုံးလေးတွေ လုံးပြီး ပုံနဲ့တောင်တင်လိုက်သေး... အဟေးဟေး... ဒါနဲ့ သကြီးက မစွံသေးဘူးတဲ့.. ဟားဟား...း))))
Saturday, 10 July 2010 at 01:35:00 BST
ရွှေစင်ဦး တို့ ကတော့ စွန်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ ဆေးမလိုပါဘူး
သူကြီးမင်း နဲ့ ကိုကြီးကျောက်တို့ သာ များများလေး သုံးဆောင်ကြပါ မကြာခင် ဝါဝင်တော့မယ်ဗျ
သူကြီးမင်း ရဲ့ ပညာရပ်တွေ ကတော့ ချီးကျူးလောက် ပါပေတယ် ကုန် မကုန်နိုင် ပညာစုံ လွန်းပါတယ် ပီအိပ်ခ်ျဒီ ဘွဲ့ ကြီးနဲ့ ထိုက်တန် လှပါပေတယ်
Saturday, 10 July 2010 at 04:04:00 BST
အော်... အဲ့လိုတွေလဲ ရှိသလားတဲ့ ..
Saturday, 10 July 2010 at 08:24:00 BST
ဆေးဖော်က တော့ တယ်ကောင်းကိုကိုမောင်ရော ဒီဆေးတွေဖော်ပြီး တစ်ယောက်တည်းမသောက်နဲ့နော်. . . ဘလော့ က ဘော်ဒါတွေကိုလည်း မျှပါအုံး. . . :P
Saturday, 10 July 2010 at 11:35:00 BST
ဆေးဖော်ပြီးရောင်းစားရင် မီလျှံနာ ဖြစ်လောက်ပြီ...
သူများတွေအတွက်ကြီးဘဲ ဖော်မနေနဲ့ ကိုယ်ဖော်တဲ့ဆေး ကိုယ့်အတွက်စွမ်းအောင် အရင်လုပ်ပါဦး...
ဘယ်ခါစားရမလဲ.. စောင့်နေမယ်နော်.. ပီယဆေးလိုချင်သူတွေရှိရင်သူဂျီးဆီလွတ်လိုက်မယ်..း)
Saturday, 10 July 2010 at 22:28:00 BST
ဟယ်....တကယ်ပဲ ယူကေမှာနေပြီး ပီယဆေးရောင်းတာလား???
(နောက်တာပါ....တောရွာမြင်ကွင်းဓလေ့လေးတွေကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးတတ်တယ်....ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ဒါနဲ့ တုံးဖလားရွာသူကြီးနာမည်ကလည်း ကိုကိုမောင်ပဲတဲ့လား.....း))
Sunday, 11 July 2010 at 00:45:00 BST
ဆေးစွမ်းကြောင်း သူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် သက်သေပြပါဗျို့...။
ရွာမြောက်ပိုင်းက မချော ဆိုတာ သိတဲ့ မချောများလား မသိဘူး ဟဲဟဲ ....။
Sunday, 11 July 2010 at 11:35:00 BST
သူကြီးဆေးတွေ ကြော်ငြာကောင်းကောင်းနဲ့ ကြော်ငြာလိုက်ပါ။ မင်းသားနေရာကို ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ပွဲပြီးပြီ (နာမည်ကြီးပြီလို့ ပြောတား))
Sunday, 11 July 2010 at 17:57:00 BST
Monday, 12 July 2010 at 05:55:00 BST
Monday, 12 July 2010 at 09:40:00 BST
အိမ်ထောင်ရေးကုထုံးကလဲ ကိုယ်တွေ့ဘဲ ထင်ရဲ့...
ပြန်မျှဝေပေးလို့ အားလုံးက ကျေးဇူးတင်ကြမှာ သေချာပါတယ်.. :)
Monday, 12 July 2010 at 11:55:00 BST
သူကြီးရေ.. ကုထုံးတွေချည်းပေးမနေနဲ့အုံး။ ကိုယ့်အတွက်လည်းကိုယ်လုပ်အုံးး)) (စာကျက်ဖို့ပြောပါတယ်)
တုံးဖလားသူကြိးမင်းရေ...ဒီတခါတော့ ပြောသမျှလွဲရပြီထင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်လည်း ဒီအကြောင်းလေး လောကဟိတရာသီကျမ်းမှာ မိန်းမတို့ကို နမ်းရာကျမ်းဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်ွးသူငယ်ချင်းတွေကြားခပ်ကြွားကြွားလေး ပြောတာပေါ့ သူကြိးမင်းရာ။ဘာပြောကောင်းမလဲ ကျွန်တော်ပက်ပက်စက်စက်ကွဲခဲ့တာပဲဗျ...ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ ဘုန်းဘုန်းလူထွက်ကိုဘခက်ပြောတဲ့စကားကိုသာ နားထောင်ကြည့်ပါတော့ဗျာ..ကိုဘခက်ပြောလိုက်သော စကားမှာ ...ဟေ့ကောင် တော်တော် အ ပါလား ထိတဲ့နေရနမ်း အားလုံးစွမ်းတာချည်းပဲကွ ဟူသတည်း။
Wednesday, 28 July 2010 at 21:16:00 BST
Wednesday, 28 July 2010 at 21:17:00 BST
ဟိုက်ရှားဘားစ်...ဒါကတစ်မျိုးပါလားသူကြီးရဲ့...ထူးပေဆန်းပေသည်...ဦးရေချမ်းရဲ့ညီလို့ပဲ အော်လိုက်ချင်တော့တာပါပဲ...ဆေးဖော်ရင်းနဲ့များ ဆေးလုံးအပေါ့အငန်မြည်းရင်း တစ်လုံးလောက်သာ မြည်းကြည့်မိလို့ကတော့ အင်း...တွေးတောင် မတွေးရဲပါလား သူကြီးရယ်...
Saturday, 24 September 2011 at 20:26:00 BST
Also visit my page - fsmat.at
မလေးရှား နဲ့ ထိုင်းနယ်စပ်ဗုံး ပေါက်ကွဲမှု အကြိမ်၂၀ ကျော် ဖြစ်ပွား